आज 'भ्यालेनटाइन डे'
आज ‘भ्यालेनटाइन डे’
काठमाडौँ, २ फाल्गुन । आज भ्यालेनटाइन डे अर्थात् प्रणय दिवस । आज विश्वका करोडौँ मानिसले यो दिनलाई प्रेमी प्रेमिकाहरु एक–अर्कालाई आफ्नो भ्यालेन्टाइन सम्झेर सन्देश र प्रेम उपहारको आदान–प्रदान गरेर मनाउने गर्छन् । पछिल्लो समय भ्यालेन्टाइनकाको प्रसिद्धि युरोपमा मात्र सिमित नरहेर पछिल्लो समयमा विश्वभर नै फैलिएको छ । यसैको नमूनाको रुपमा नेपालमा पनि हरेक वर्षको १४ फेब्रुअरीका दिन भ्यालेन्टाइन डे मनाइईदै आइएको छ । विश्वव्यापी मान्यता पाएको भ्यालेन्टाइन डे ले नेपाली समाजमा समेत जरो गाडिसकेको छ ।
कोरोनाले मानिसलाई के सिकाउँदैछ ? संसारलाई बिल गेट्सको मार्मिक खुल्लापत्र
नयाँ वर्ष २०७७ सालको राशिफलः थाहा पाउनुहोस् तपाईंलाई ग्रहगोचरको कस्तो फल प्राप्त हुन्छ ?
लकडाउनको समय आफ्नो बालबालिकाका लागि यसरी गर्नुहोस् सदुपयोग
तपाईंको निधारको रेखामा लुकेका हुन्छन् यस्ता रहस्यहरू
प्रेम सम्बन्धलाई मजबूत पार्ने ज्योतिष शास्त्रका यी पाँच उपाय
पढ्ने र तास खेल्नेलाई पागलपनको सम्भावना कम : अध्ययन प्रतिवेदन
पतिमाथि हावी हुन्छन् यी राशिका पत्निहरू
माया बढाउने अचुक उपाय ‘चुम्बन’
क्यान्सर रोक्नेदेखि तौल घटाउनेसम्म उपयोगी हुन्छ कालो चिया
यी ४ राशी हुने व्यक्ति सबैभन्दा धनी हुन्छन्
यसकारण पर्याप्त पानी पिउनुहोस्
मान्छेलाई थाहा छ ? मोटोपनाले भन्दा एक्लोपनाले चाँडै मार्छ
अनुसन्धानको निष्कर्षः फोहोरी र ढिला सुत्ने मानिस बौद्धिक हुन्छन्
कस्ता व्यक्ति बढी घुर्छन् ?
थाहा पाइराख्नुहोस् दैनिक जीवनमा आवश्यक यी दश वस्तुको ‘एक्सपाइरी डेट’
बलात्कारीविरुद्ध बर्बर कानुन, कुन देशमा कस्तो सजायँ ?
अनुहार चम्काउन आलुको रस
के तपाईको जीवनमा पनि देखा पर्दैछन् शुभ समयका यी पाँच संकेत ?
एक्लोपना फाइदाजनक कि हानीकारक ?